02/15/13 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
အကြမ်းဖက် အသေခံဗုံးခွဲခြင်းကို အစ္စလာမ်က ခွင့်ပြုသလား?
February 15, 2013 S.M Osman No comments
ယခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်တွေဟာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိအသေခံအကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုး ပိုပိုပြီးပြီးပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာမှာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ အသေခံအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို ခွင့်ပြုသလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။
အစ္စလာမ်သာသနာမှာ အကြမ်းဖက်မှုအတွက် နေရာလုံးဝမရှိပါဘူး။ အသေခံဗုံးခွဲမှုတွေဟာ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာနဲ့ လားလားမှ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ လွဲမှားယူဆချက်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းပြပါမယ်။
အသခံဗုံးခွဲမှုတွေကို ကမ္ဘာအနှံ့မှာ တွေ့မြင်နေရပြီးတော့ ဒီအပြုအမူတွေကို အစ္စလာမ်သာသနာထဲမှာ တရားဝင်တဲ့အပြုအမူသဖွယ် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အစ္စလာမ့်အရင်းအမြစ်စာပေတွေကို သေချာစွာလေ့လာကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် ဒီလိုအပြုအမူတွေဟာ ဘယ်လိုမှ အခြေအမြစ်မရှိပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာကို လိုက်နာသူတွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးမှရှိမနေရပါဘူး။ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ပြောကြားတာက .....
" မိမိကိုယ်ကိုမိမိ သေကြောင်းမကြံကြနှင့်။ အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အား ကရုဏာထားတော်မူသော အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၄ အခန်းငယ် ၃၀)
" အသင်တို့၏လက်များဖြင့် အသင်တို့ကိုယ် အသင်တို့ မဖျက်စီးကြနှင့် " (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၂ အခန်းငယ် ၁၉၆)
" အစ္စလာမ်သာသနာဟာ အပြစ်ကင်းမဲ့သူများ ရန်လိုမှုမရှိသူများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါတယ်။ ထောင်ထားခြားနား ရန်လိုသူများမှ တပါး အခြားသူများအား ကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံခြင်းမပြုရချေ။ " (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၂ အခန်းငယ် ၁၉၄)
ဒီမုက္ခပတ်တော် ၃ ခုနဲ့တင် မွတ်စလင်တွေရဲ့ လေယျာဉ်ပျံနဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးဝင်တိုက်တာမျိုးတွေ၊ အပြစ်မဲ့ လူထုကြားထဲကို အသေခံဗုံးခွဲသူတွေစေလွှတ်တာတွေကို ရပ်တံ့ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြရတာလဲ? ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ ဒီလူတွေဟာ အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ သွန်သင်ချက်မဟုတ်ဘဲ မှားယွင်းတဲ့ ချွတ်ချော်မှုတွေ၊ ကတိပေးမှုတွေနဲ့ ရိုက်သွင်းခံထားရ(brain wash) လုပ်ခံထားရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် သာသနာ့အာဇာနည်အဖြစ်သတ်မှတ် ခံရပြီး ကောင်းကင်နိဗ္ဗာန်ဘုံကို ဝင်ရောက်ရလိမ့်မယ်လို့ လွဲမှားစွာ ယူဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအကြမ်းဖက်သူတွေကို သူတို့ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေအားဖြင့် ငရဲ့ဘုံကိုသာ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(sa) ရဲ့ သာဝကတစ်ဦးဖြစ်သူ အဘူဟူရိုင်ရာဆိုသူက တမန်တော်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ကို ယခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ (ဟဒီးစ်)
"အကြင်သူတစ်ဦးဟာ ဓား၊လှံ၊ လက်နက် သို့မဟုတ် မိမိလက်ဖြင့် မိမိကုယ်ကိုမိမိသေကြောင်းကြံပါက မိမိကိုယ်ကို မိမိ ငရဲသို့ သွတ်သွင်းခြင်းပင်ဖြစ်၏" (ဘူခါရီကျမ်း)
ဒါ့အပြင် ယခုလိုအကြမ်းဖက်အပြုအမူမျိုးတွေကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် အပြစ်မဲ့ လူသားတွေသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာ ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာက မိန့်ကြားတာက ...
"မြေပြင်ပေါ်တွင် ခိုးဆိုးလုယက်၍ မတည်ငြိမ်မှုကိုဖန်တီးပြီး မကောင်းမှုကျူးလွန်ကာ သွားလာနေသူမဟုတ်က မည်သူမဆို လူတစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်သည်ရှိသော် ထိုသူသည် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအား သတ်ဖြတ်သူမည်၏။" (ကိုရ်အာန်ကျမ်းစာ အခန်းကြီး ၅ အခန်းငယ် ၃၃)
ဒီမုက္ခပတ်တော်ကို အခြေခံပြီး ဟာဇရတ် မေရ်ဇာဂူလာမ် အဟ်မဒ်သခင် ရှင်းပြတာက ....
မြေပြင်ပေါ်တွင် ပုန်ကန်ထကြွ၍ မငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဆူပူမှုကို ဖန်တီးနေသူမဟုတ်က မည်သူမဆို တစ်စုံတစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်သော် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ လူတစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်သော် ထာဝရဘုရားသခင်၏ အမြင်တွင် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအား သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်၏။ ဒီမုက္ခပတ်တော်နဲ့တင် အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား သတ်ဖြတ်ခြင်းမှာ မည်မျှအပြစ်ကြီးသည်ကို သိရှိနီုင်ပါသည်။ (ကတ်ရှမာအေ မာရေဖတ် - စာ ၂၃-၂၄ မှ)
ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို မိမိကိုယ်ကို အသေခံ၍ အကြမ်းဖက်မှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် အပြစ်မဲ့သူများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်ခြင်းဟာ အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရပ်တွေသာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းထင်ရှားပါတယ်။
အကြမ်းဖက် အသေခံဗုံးခွဲခြင်းကို အစ္စလာမ်က ခွင့်ပြုသ...